कोरोनाका लागि तयार छैन्न पोखराका अस्पतालहरु : साझा पार्टी – Samacharpati
पोखरा, १० चैत । कोरोनाको सन्त्राष फैलिरहेको अवस्थामा साझा पार्टीले पोखराका विभिन्न अस्पतालहरुको तयारीको विषयमा जानकारी लिएको छ । उसले कोरोना भाइरसका विरामी आएको खण्डमा पोखराका अस्पतालहरु उपचार गर्नका लागि तयार नभएको निष्कर्श निकालेको छ ।
साझा पार्टीले यो अवस्थालाई निकै नाजुक बताएको छ । खासगरि कोरोनाका लागि हरेक अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाएको स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहेको अवस्थामा साझा पार्टीले भने स्थिती सोँचेजस्तो नरहेको बताएको हो ।
आईतबार साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसहित गण्डकी प्रदेश र जिल्ला सँयोजकसहितको टोलीले पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मनिपाल अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल अस्पताल लगाएतमा प्रत्यक्ष पुगेर सोधखोज गरेको थियो । र, अधिकांश अस्पतालमा भनेजस्तो तयारी नदेखिएको टोलीको निष्कर्श छ ।
साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुशिला केसी अधिकारीको नेतृत्वमा टोली अस्पतालहरुमा पुगेको थियो । टोलीमा अर्का केन्द्रीय सदस्य रजनी केसी र कास्की जिल्ला सँयोजक अर्जुन खनाल रहेका थिए ।
‘हामी हरेक अस्पतालमा गयौँ । त्यहाँ कुनै पुर्वतयारी देखिएन । बरु संक्रमित आएको खण्डमा भाग्नुको विकल्प छैन । हामीसँग न मास्क छ, न कुनै उपकरण छन् भनेर उल्टै चिकित्सकहरु त्रसित भएको पायौँ ।’ साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुशिला केसी अधिकारीले भनिन् ।
त्यसो त स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकले भने यो प्रदेशमा सम्पूर्ण रुपमा तयारी भएको दाबी गरेको उनले बताईन् । यद्यपी छेऊकै अस्पतालमा भने चिकित्सकहरुले संक्रमित आएको खण्डमा आफ्नै सुरक्षा गर्ने आवश्यक सामाग्री पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेको टोलीले भेट्यो ।
टोलीकै अर्का सदस्य साझा पार्टीका कास्की जिल्ला सँयोजक अर्जुन खनालले त अझै संक्रमित आशंका गरिएका विरामीहरुलाई खुलमखुल्ला अन्य विरामीहरुसँगै राखेर उपचार गरिएको आफूले देखेको दाबी गरे । ‘अस्पतालमा उपचार गर्न जाने की संक्रमण फैलाउन जाने ? यो त झन् खतरा पो भयो ।’ खनालले भने–‘यो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले बेवास्ता गरेको देखियो ।’
साझा पार्टीको टोलीले सरकारसँगै सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा अझ बढि सचेत हुन सुझाव समेत दिएको छ । सरकारले आवश्क तयारी गरिरहँदा चाहिने स्वयंसेवी सहयोगी हातहरु अगाडि बढाउन साझा पार्टी सँधै तयार रहेको टोलीले बताएको छ ।
साथै साझा पार्टीले सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि मास्क तथा सेनिटाइजर वितरणलाई तीव्र पारेको छ । साथै सम्पूर्ण मिडियाहरुमार्फत कोरोना विरुद्धको जनचेतनामुलक सन्देश प्रवाहलाई चुनावको बेला भन्दा अझै बढि सक्रियतापुर्वक गरिरहेको साझा पार्टीले दाबी गरेको छ । साथै पार्टीले सर्वसाधारणलाई संयमित अनि सतर्क रहन आग्रह समेत गरेको छ ।
एक प्रतिक्रिया on “कोरोनाका लागि तयार छैन्न पोखराका अस्पतालहरु : साझा पार्टी”
राम भरोसा हो! जनतामा सजकता साथसाथै सम्बन्धित निकायहरुलाई उच्चमनोबल साथ तयारि हालतमा राख्ननु पर्यो! I यति बेड उति बेड भन्दा पनि यति जनसक्ति PPE सहित तयारि छ भन्ने भरोसा दिलाय केहि राहत होला! जनता घर थुन्ने covid19 को बिमारि hospital पुगे भागाभग हुने अबस्था आए झन बिकराल अबस्था हुन्छ कि?
पर्साको गाँउबाट गाँजासहित एक युवक पक्राउ
पोखरा महागरपालिकाले सुत्केरीकाे घरघरमै पुगेर पौष्टिक आहार प्रदान
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ पुग्यो,